Chiedza cheShoko raMwari Chinosvika kuJapan | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mongolian Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Zulu
Mapepa okukoka vanhu kuhurukuro akashandiswa muTokyo uye akamwayiwa nendege muguta reOsaka
MUSI wa6 September 1926, mumwe mupilgrim (mutariri wedunhu) aiva chizvarwa chokuJapan akadzoka kuJapan achibva kuUnited States ava mumishinari. Panguva iyoyo muJapan maingova nemunhu mumwe chete ainge akanyoresa kuti awane magazini yeNharireyomurindi uye ainge atanga boka rokudzidza Bhaibheri muKobe. Vadzidzi veBhaibheri vakava negungano ravo rokutanga musi wa2 January 1927, muguta iroro. Gungano racho rakapindwa nevanhu 36 uye vasere vakabhabhatidzwa. Iwayo ndiwo matangiro akaita basa redu muJapan, asi vanhu vashoma ivavo vaizokwanisa sei kuparidzira vanhu vanosvika mamiriyoni 60 vomuJapan vaifanira kuona chiedza chechokwadi cheBhaibheri?
Muna May 1927, Vadzidzi veBhaibheri vakatanga kukoka vanhu kuzonzwa hurukuro dzeBhaibheri. Hama padzaikoka vanhu kuzonzwa hurukuro yokutanga yaizopiwa muOsaka, dzakaisa zvikwangwani muguta racho dzikatumira mapepa 3 000 kuvanhu vaizivikanwa vaiva nezvinzvimbo. Vakaparadzira mahendibhiri 150 000 uye vakashambadza hurukuro mumapepanhau makuru omuOsaka uye pamatikiti echitima 400 000. Zuva rakazopiwa hurukuro yacho, ndege mbiri dzakamwaya mahendibhiri 100 000. Vanhu vanenge 2 300 vakazadza Osaka Asahi Hall kuti vanzwe hurukuro yaiva nemusoro waiti “Umambo hwaMwari Hwaswedera Pedyo.” Vamwe vanenge 1 000 vakatozonzi vadzokere kumba nokuti imba yacho yakanga yazarisa. Pakapera hurukuro yacho, vanhu vanopfuura 600 vakasara kuti vanzwe chikamu chemibvunzo nemhinduro. Mwedzi yakatevera, hurukuro dzeBhaibheri dzakapiwa muKyoto nemamwe maguta aiva kumadokero kweJapan.
Muna October 1927, Vadzidzi veBhaibheri vakaronga kuti papiwe dzimwe hurukuro muTokyo. Vanhu vane zvinzvimbo zvepamusoro vakakokwa zvekare, kusanganisira mutungamiriri wehurumende, nhengo dzeparamende, vafundisi uye vatungamiriri vehondo. Hama dzakakoka vanhu dzichishandisa zvikwangwani, mapepanhau, mahendibhiri 710 000, uye vanhu 4 800 vakauya kuzonzwa hurukuro nhatu muguta guru iroro reJapan.
MaColporteur (mapiyona) akashanda nesimba pakuzivisa mashoko oUmambo mumisha yevanhu. Imwe hanzvadzi yaivawo pamacolporteur okutanga muJapan yainzi Matsue Ishii, pamwe nomurume wayo Jizo, vakaparidzira chikamu chakakura chaizvo chenyika yacho, kubva kuSapporo iri kuchamhembe kusvika kuSendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kyoto, Okayama, uye Tokushima. Hanzvadzi Ishii neimwe hanzvadzi yakwegura yainzi Sakiko Tanaka vakapfeka nguo dzavo dzinonzi kimono kuti vashanyire vakuru vakuru vehurumende. Mumwe mukuru mukuru wehurumende akakumbira mabhuku 300 akanzi The Harp of God uye mamwe 300 akanzi Deliverance okuisa mumaraibhurari omumajeri.
Katsuo naHagino Miura vakapiwa mabhuku naHanzvadzi Ishii uye vakabva vangoona kuti vakanga vawana chokwadi. Vakabhabhatidzwa muna 1931 uye vakava macolporteur. Haruichi naTane Yamada nedzimwe hama dzavo dzakawanda vakagamuchira mashoko oUmambo gore ra1930 risati rasvika. Haruichi naTane Yamada vakava macolporteur uye mwanasikana wavo Yukiko akanoshumira paBheteri muTokyo.
NGORO DZAINZI JEHU
Jehu Mukuru aikwana mapiyona matanhatu
Kare ikako, motokari dzaidhura chaizvo uye migwagwa yainge yakashata. Saka Kazumi Minoura uye mamwe macolporteur echiduku vaishandisa ngoro dzainge dzakagadzirwa kuita imba. Vakadzitumidza kuti Jehu vachitora zita iroro pana Jehu aimhanyisa ngoro chaizvo akazova mambo weIsraeri. (2 Madz. 10:15, 16) Kwaiva nengoro hombe dzaikwana vanhu vatanhatu uye diki dzaikwana vanhu vaviri. Hombe dzacho dzaiva nhatu uye imwe neimwe yainge yakareba mamita 2,2 yakafara mamita 1,9 yakakwirira mamita 1,9. Ngoro diki, idzo dzakagadzirwa pabazi rokuJapan dzaiva 11, uye dzaiita zvokudhonzwa nemabhasikoro. Kiichi Iwasaki, uyo akabatsira kugadzira ngoro idzi anoti, “Jehu imwe neimwe yaiva netende uye yaiva nebhatiri remota raishandiswa kubatidza magetsi.” Macolporteur aiita kuti chiedza chechokwadi chipenye muJapan yose achidhonza uye achisunda ngoro dzacho achikwira nokudzika makomo uye achiyambuka nzizi kubva kuHokkaido yaiva kuchamhembe kusvika kuKyushu iri kumaodzanyemba.
Jehu Mudiki aikwana mapiyona maviri
Mucolporteur ainzi Ikumatsu Ota akati: “Pataisvika muguta, taisiya Jehu wedu pedyo nerwizi kana pane imwewo nzvimbo isina chinhu. Taitanga kushanyira vanhu vaiva nezvinzvimbo vakadai sameya weguta, uye tabva ikoko ndipo pataizoshanyira vanhu mudzimba dzavo tichivaratidza mabhuku edu. Pataipedza ndima yacho, taibva taenda kune rimwe guta.”
Raiva “zuva rezvinhu zviduku,” Vadzidzi veBhaibheri 36 pavakaita gungano ravo rokutanga muKobe. (Zek. 4:10) Pangopfuura makore mashanu chete, muna 1932, muJapan makanga mava nemacolporteur nevaparidzi 103 uye vakagovera mabhuku anopfuura 14 000. Iye zvino zvapupu zviri kuparidza munzvimbo dzinopfuura nevakawanda mumaguta uye vaparidzi vanoda kusvika 220 000 vari kuita kuti chiedza chavo chipenye muJapan.—Kubva mudura renhoroondo yedu kuJapan.
Mifananidzo yakadhirowewa naKiichi Iwasaki uyo akagadzira ngoro dzainzi Jehu paBheteri rokuJapan